IFTIINKACUSUB.COM: Qisso cajiib ah: Gurigayga waxa aan ka maqnaa muddo dhan labatan sano!
Qisso cajiib ah: Gurigayga waxa aan ka maqnaa muddo dhan labatan sano!
Waxaa la sheegaa nin ayaa maalin kasoo baxay gurigiisa si uu beertiisa uga shaqeeya sidii caadada u ahayd, xaaskiisa ayuu sii macasalaameeyay iyo caruurtiisii waxaanuu guriga kasoo baxay isagoo Faashkiisii beerta uu ku xagaafaayay wata .
Waxa uu ahaa ninkii looga bartay inuu gurigiisa kusoo noqdo, marka ay cadceedu godkeeda sii galayso ,balse waa uu soo noqon waayay , maalintii labaad sidoo kale …, maalintii sadexaad sidaas oo kale…, dadkii magaaladu meelkasta ayay ka raadiyeen laakiin way waayeen oo waa laga quustay meel uu jaan iyo cirirb dhigay, cidi way garan wayday .
Labaatan sanno kadib ayaa xaaskii uu qabay waxay maqashay albaabka guriga oo lasoo garaacayo , laakiin garaacani waxa uu kaga duwanaa kii caadiga ahaa inuu u egyahay kii ninkeeda oo kale, way soo carartay albaabkii ayay furtay , waxay aragtay oday laakiin indhihiisii ayay garatay , odaygeedii ka maqnaa Muddo labaatan sanno ahaa ayaa guriga dib ugu soo noqday.
Ninkii gurigiisa ka maqnaa moddo dheer ayaa dib ugu soo noqday isagoo daallan ayuu isku tuuray kursigii ugu dhawaa , wey soo ag fadhiisatay , dhagtiisa ayay waxay ku waydiisay Su’aal ahayd "xaggeed ku sugnayd mudadaas aadka u dheer"?
Indhuhuu ka ilmeeyay , kadib ayaa waxa uu meeshii ka bilaabay sheeko dheer:
"waad xasuusataa maalintii aan guriga ka baxay, anigoo u socda beertii sidii caadad ii ahayd maalin kasta.Maalintaa waxaan arkay nin wadada taagan una ekaa qof wax raadinayay oo kale ama qof sugaya , marka uu i arkay ayuu iisoo dhawaaday , kadib dhagta ayuu wax iigu sheegay , waxaan ku idhi :Maxaad tidhi?oo waxaan garan waayay wixii uu dhagta iigu sheegay waxay ahaayeen , aadbuu u qoslay waxaa indhihiisa iiga muuqday shar fara badan , kadib ayuu igu yiri:
"waxaan dhagtaada ku akhriyay waxa uu ahaa sixir, waxaanan sixirka gaarsiiyay gudaha naftaada , adiguna maanta waxaad ii tahay addoon intaad nooshahay oo dhanna anaa ku leh, haddii aad amarkayga qaadan weydo waxaad ogaataa in jin ku qaadanayo kuna dafi doono Jidhkaagana cadcad loo googooynayo doono, badda gudaheedana lagugu tuuri doono , meeshaas oo ay naftaadu ku xayir naan doonto inta boqorka Jinku uu kursigiisa ku fadhiyo Boqortooyadana uu maamulayo.